Plasma dhigaa - Wikipedia
Blood Plasman dhangala'aa dhiiga keessatti argamu kan yeroo dhiinni qabbanaa'u mul'atu. Plasman kutaa dhiigaa guuddicha yoo ta'u, qabiyyee dhiigaa keessaa harka 55% ta'a.
Blood Plasman Protein barbachisaa ta'an of kessaa qaba. Porotiinonni kunniinis Fibrinogen, Globulins fi Human Serum Albumin jedhamanii waamamu. Yeroo tokko tokko blood plasmaan wonna xuraawaa ta'in kan virus of keessaa qabu qabachu danda'a. Kunii immo dalagaa Viral Processing jedhamuun qulquleeffama. Dhigaa woraabamee taa'u keessatti blood plasma, seelii dhiigaa irraa gargar basuuf karaa salphaa ta'e Centrifugation jedhamutti fayyadamna.
Blood plasman Clotting Factoriin akka tishuu keessaa basani "Serum" jedhamee waamama.
Plasman akka bishanii anana jalla qararre haffu jirra. Plasman bayyinan Bishaan, Blood Protein, fi Inorganic Electrolytes offii kessa qaba. Plasman kuni akka karra transportii ta'e wantonni akka Glucose, Lipid, Amino Acid, Hormone, Metabolic end Products, Carbon dioxide (CO2) fi oxygen (O2) dhigga kessa akka darbanni qarqarra. Dandettin oxygen dabarsu fi oxygen ofii kessatti qabachu plasma yoo Hemoglobinii RBC wajjin walitti lallami bayye diqqa dha. Haa ta'u malle halla Hyperbaric kessatti (CO2) plasma kessa jirru ni darratta.
Plasman clotting factors issa kessa akka darbani fi akkasumas ofii kessatti qabuun qarqarra. Proteiniin plasman ofii kessa qabbu Dhibaa Oncotic dhigaa akka sirritti demmu qarqarra. Plasmapheresis kan jedhamu gossa therapy plasma fi Red Blood Cell gargarri itti bassanni. [[simple:Blood#Plasma
Retrieved from "http://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Plasma_dhigaa&oldid=22247"	Category: Dhigga	Navigation menu
This page was last modified on 7 Bitootessa 2013, at 17:57.